Akanjo mangatsiaka mangatsiaka → Akanjo fivarotana mangatsiaka • peta-kofehy solosaina P&M
Kiraro frizera ho an'ny toe-javatra faran'izay mafy
Ao amin'ny departemanta akanjo ho an'ny vata fampangatsiahana sy fivarotana mangatsiaka misy sokajy kiraro frizera. IN sokajy kiraro izahay dia manolotra ba kiraro mafana voarindra natao hiasa amin'ny maripana ambany. Ny kiraro matanjaka, ny zaitra mihamafy ary ny fametahana fanampiny dia fiantohana fiarovana sy fampiononana. Ireo kiraro dia tsy hoe manana fiasa namboarina mba hiasa ao anaty vata fampangatsiahana sy efitrano mangatsiaka, fa toa maoderina ihany koa.
BERING BIS baoty fivarotana mangatsiaka
Kalitao avo lenta ho an'ny fampiononana sy fiarovana
Ny tongotra dia iray amin'ireo faritra amin'ny vatana izay mora mihamangatsiaka, ka izany no maha-zava-dehibe ny fiarovana azy ireo tsara ho an'ireo miasa mandritra ny ora maro isan'andro ao amin'ny efitrano misy mari-pana midina hatramin'ny -45 degre Celsius.
Ho fanampin'ny fanamorana sy fiononana amin'ny habeny voafantina tsara, ny kiraro dia tsy maintsy manome fiarovana mahomby amin'ny fanala. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, dia nataonay antoka fa nisy modely isan-karazany niseho tamin'ny tolotra.
Ny tolotra dia misy kiraro frizera tsy tantera-drano vita amin'ny hoditra omby toy ny Baoty voaharo BCW, voaroaka baoty BCU. Manana baoty fivarotana mangatsiaka tsy misy rano koa izahay BERGIN BIS vita amin'ny fifangaroan'ny PU mahatohitra ny mari-pana ambany hatramin'ny - 30 degre. Ny maodely lafo indrindra dia ny kiraro Rockfall.
Footwear Rockfall Alaska Coldstore manome fiarovana izy ireo amin'ny fianjeran'ny -40 degre, vita amin'ny hoditra voamadinika avo lenta izy ireo, izay miaina sy tsy mahazaka rano. Ho fanampin'izay, manana fantsom-panafenana Thinsulate® B600 izy ireo, izay manome ny insulate termal avo indrindra sy ny fahalalahana mitafy.
Ny vokatra Rockfall dia azo alaina ao anatin'ny 7 andro fiasana, satria halefa any amin'ny trano fanatobiana entana any Angletera izy ireo.
ROCKFALL Alaska COLDSTORE fiarovana kiraro fivarotana mangatsiaka hatramin'ny -40 ° C
Ankoatry ny kiraro ilaina amin'ny asa, dia manolotra ba kiraro mitaingina ihany koa izahay, arakaraka ny maodely vita amin'ny volon'ondry, nylon na ny lamba ba nataony mafana. Ny haben'ny haben'ny habeny dia ahafahanao misafidy ny vokatra ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy.
Ny fanolorana akanjo fivarotana mangatsiaka dia misy vokatra ho an'ny akanjo feno ho an'ny mpiasa. Misy koa ny kiheba ao amin'ny magazay pataloha, palitao, fonon-tanana i overalls ho an'ny fivarotana mangatsiaka sy ny vata fampangatsiahana.
Kiraro Coldstorekiraro fivarotana mangatsiakakiraro fivarotana mangatsiakakiraro fiarovanaKiraro voaroakaKiraro rockfallkiraro ho an'ny maripana ambanykiraro manam-pahaizana manokana